Kulimale 11 itekisi ilala amankeyane | IOL Isolezwe
Kulimale 11 itekisi ilala amankeyane
Isolezwe / 5 July 2012, 09:56am / SIMPHIWE NGUBANE
Taxi accident - KULIMALE abagibeli abangu-11 itekisi ilala amankeyane emgwaqweni uMangosuthu Highway eMlazi izolo ekuseni
KULIMALE abagibeli abangu-11 itekisi ebebeyigibele ilala amankeyane emgwaqweni uMangosuthu Highway ngasesibhedlela iPrince Mshiyeni eMlazi izolo ekuseni.
Abezimo eziphuthumayo bakwa-ER24 bafike endaweni yesehlakalo abagibeli betekisi begcwele umgwaqo begquma yizinhlungu. Kube nesiminyaminya ngesikhathi abatakuli namaphoyisa behlanza umgwaqo kuphuthunyiswa nabalimele esibhedlela.
Abagibeli abalimele belashelwe endaweni yesigameko abathathu kubo abebekhala ngezinhlungu entanyeni nasemhlane bathwalwa ngohlaka baphuthunyiswa nge-ambulensi esibhedlela. Abayisishiyagalombili bathole imihuzukwana badluliselwa esibhedlela eMshiyeni beyohlolisiswa.
Abezimo eziphuthumayo bathe imibiko iveza ukuthi umshayeli wetekisi uhluleke wukuyilawula okuholele ekutheni iphaphalaze iyoshayisa unqenqema lomgwaqo ngaphambi kokuthi igingqike ilale ngohlangothi.
Kube nesiminyaminya sezimoto ngemuva kokuvalwa komgwaqo ongenela kuleli lokishi. Lo mgwaqo uvele uyalungiswa. Budebuduze nale ndawo okwenzeke kuyo le ngozi kube nenye ingozi okushone kuyona umuntu oyedwa ngoLwesibili emini.
Le ngozi ilandelwe eduze ngeyemoto yomshayeli ephaphalaze yaphonseka ezihlahleni washona kuFields Hill, ePinetown. Imibiko etholwe endaweni yesehlakalo ikhombisa ukuthi umufi uhlulekile wukuyilawula yabe isingena esihluthu.
Kwesinye isigameko, osebenza kwabacisha umlilo ushelele wakhalakathela eweni ubude balo obunga-mamitha angu-30 eHillcrest izolo. Imibiko yabezimo eziphuthumayo bakwa-Netcare 911 namaphoyisa iveza ukuthi lo wesilisa ulimale ngesikhathi ebhula umlilo obusha ubuhangu-hangu ngabo-4:30 ekuseni.
Kusetshenziswe indiza yamasosha enophephela emhlane kutakulwa lo wesilisa obe esexhunywa imishini yokuphefumula ngaphambi kokuthi adluliselwe esibhedlela iSt Augustine esesimeni esibucayi.